ICanada yenza ukugonywa kuphoqeleke emkhakheni wezokuthutha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » ICanada Breaking News » ICanada yenza ukugonywa kuphoqeleke emkhakheni wezokuthutha
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICanada Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukuhamba Kwezitimela • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Kusukela ngo-Okthoba 30, 2021, abahambi abasuka ezikhumulweni zezindiza zaseCanada, nabahambi bezitimela ze-VIA Rail neRocky Mountaineer, kuzodingeka ukuthi bagonywe ngokuphelele, ngaphandle kokulinganiselwa okuncane.
ICanada idinga ukugonywa kwe-COVID-19 kuyo yonke imisebenzi yomphakathi kahulumeni kanye nemikhakha yezokuthutha elawulwa ngokuhlanganyela.
UNdunankulu, uJustin Trudeau, nePhini likaNdunankulu, uChrystia Freeland, namuhla bamemezele imininingwane ngezinhlelo zikahulumeni zokufuna ukugonywa yi-COVID-19.
Abaqashi abasemkhakheni wezokulawulwa komoya, wesitimela nowasolwandle, kuzodingeka kuze kube ngumhla ka-Okthoba 30, 2021.
Kusukela ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19, sazibophezela ekuvikeleni impilo nokuphepha kwabo bonke abantu baseCanada. Kungakho sisebenze kanzima ukuletha imigomo ephephile futhi esebenzayo sabeka inkundla yokululama okusiza wonke umuntu. Ngenxa yezigidi zabantu baseCanada abasonge imikhono ukuze bagonywe, futhi manje ngamaphesenti angama-82 abantu baseCanada abafanelekile abagonywe ngokuphelele, iCanada ingumholi womhlaba wokugoma i-COVID-19. Njengomqashi omkhulu wezwe, uHulumeni waseCanada uzoqhubeka nokudlala indima yobuholi ekuvikeleni ukuphepha kwezindawo zethu zokusebenza, imiphakathi yethu, nabo bonke abantu baseCanada ngokuqinisekisa ukuthi abaningi babo bagonywe ngokuphelele.
The UNdunankulu, u-Justin Trudeau, nePhini likaNdunankulu, uChrystia Freeland, namuhla bamemezele imininingwane yezinhlelo zikahulumeni ezizodinga Ukugonywa kwe-COVID-19 kuyo yonke imisebenzi yomphakathi kahulumeni kanye nemikhakha yezokuthutha elawulwa yifederal.
Ngaphansi kwenqubomgomo entsha, abasebenzi bakahulumeni ku-Core Public Administration, kufaka phakathi namalungu eRoyal Canadian Mounted Police, kuzodingeka ukuthi baqinisekise isimo sabo sokugoma ngaphambi kuka-Okthoba 29, 2021. Labo abangafuni ukudalula isimo sabo sokugoma noma ukuba ngokugcwele ukugonywa kuzobekwa ekhefini lokuphatha ngaphandle kwenkokhelo ekuqaleni kukaNovemba 15, 2021.
Abaqashi ku- umoya olawulwa yifederally, imikhakha yezokuthuthwa kololiwe, nolwandle kuzoba kuze kube ngumhla ka-Okthoba 30, 2021, ukusungula izinqubomgomo zokugoma eziqinisekisa ukuthi abasebenzi bayagonywa. Kusukela ngo-Okthoba 30, 2021, abahambi abasuka ezikhumulweni zezindiza zaseCanada, nabahambi bezitimela ze-VIA Rail neRocky Mountaineer, kuzodingeka ukuthi bagonywe ngokuphelele, ngaphandle kokulinganiselwa okuncane. Uhulumeni usebenzisana nezimboni kanye nabalingani ababalulekile ukubeka imfuneko eqinile yokugomela imikhumbi yezikebhe ngaphambi kokuqala kwesizini yama-2022.
Izinhlangano zomqhele kanye nama-ejensi ahlukene ayacelwa ukuthi asebenzise izinqubomgomo zomuthi wokugoma obonisa izidingo ezimenyezelwe namuhla kulo lonke umsebenzi womphakathi. Isikhulu Esibambile Sabasebenzi Bezokuvikela sizokhipha futhi isiqondisi esidinga ukugonywa Kwamasosha AseCanada. Uhulumeni uzoqhubeka nokusebenzisana nabaqashi kwezinye izindawo zomsebenzi ezilawulwa yizimboni ukuqinisekisa ukuthi ukugoma kubekwa phambili kubasebenzi kule mikhakha.
Ngokudinga ukugonywa kubasebenzi bakahulumeni, abahambi, kanye nabasebenzi abasemikhakheni yezokuthutha elawulwa nguhulumeni, uHulumeni waseCanada uzonciphisa ubungozi be-COVID-19, avikele ukuqubuka kwesikhathi esizayo, futhi avikele kangcono impilo yabantu baseCanada. Ukugoma kuyaqhubeka nokuba seqhulwini kuhulumeni njengoba sisebenzela ukuqinisekisa ukuvuselelwa kwezomnotho okuqinile nokwakha iCanada ephephile futhi enempilo kuwo wonke umuntu.
Abaqaphi base-Afrika balwa nokuzingelwa ngokungemthetho ngaphansi kwesimo se-COVID ...
Izithombe ezihehayo zaseSeychelles zokuheha izivakashi ezivela ...